Umbono weprojekthi kunye nokusika icandelo nge-AutoCAD 2013 -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Umbono ojoliswe kwiprojekthi kunye necandelo elinqunywe nge-AutoCAD 2013
Umbono ojoliswe kwiprojekthi kunye necandelo elinqunywe nge-AutoCAD 2013
Phakathi kolona tshintsho lubalulekileyo kwiinguqulelo zamva nje ze-AutoCAD isebenza ngeemodeli ze3D. Kwiiforamu ezinodidi lwe-AutoCAD 3D, kuye kwacelwa ukuba ezinye izinto ze-Inventor zisiwe kuhlobo olusisiseko kwaye oku kungenxa yotshintsho olusetyenziswe yi-AutoDesk ukusukela kwiinguqulelo zika-2010, nangona inkqubela phambili ihamba ngandlela thile.
Nangona kunjalo okubalulekileyo kwezinye iinkqubo zokhuphiswano, kulabo abenza oku nge-AutoCAD kwimodeli, kubonisa ukuhamba phambili kubaluleke ngakumbi, ukuba sinokuyifunda kwiphepha.
Makhe sibone umzekelo olandelayo usebenzisa i-AutoCAD 2013 kwenye yemisebenzi yothisha wase Astete López.
1 Yakha into ye-3D kwi-2D.
Sinalo mzobo owenziwe ngobukhulu obu-2 obuvela kwiModeli. Ukuyijonga kwimowudi ye-isometric, siya kwi-Viewcube kwaye sikhethe umbono we-isometric South-East.
Emva koko ukudala into ye-3D sisebenzisa umyalelo we-PRESSPULL
Kuyathakazelisa ukuba lo myalelo usebenza ngento, ngokungathi siyiguqulele kwi-polyline okanye nakwindawo eboshwe. Ngolu khetho lokugqibela, cofa nje ngaphakathi kwendawo kwaye ucele ukuba singene kubukhulu be-extrusion. Singayenza ngamandla ngaphandle kokubonisa ubukhulu kodwa intshukumo yemouse.
2 Yenza imibono ye-3D imodeli
Ngenxa yoku, sikhetha i-tab yoYilo, emva koko sibonisa ukuba intetho entsha mayenziwe kwinto (Izinto) nangona indawo yokusebenza (Yonke imodeli) nayo inokukhethwa. Qaphela ukucaca komgca wokuyalela odlulayo kwiscreen, njengoko sele kuphunyeziwe kwi-AutoCAD 2012 kunye no-2013. okwangoku, kusenokwenzeka ubone AutoCAD 2013 njenge-AutoCAD 2008 nangona kungekudala okanye kamva akusayi kuphinda kwenzeke.
Emva kokuba into ekhethiweyo, icela igama loLungiselelo ukuba lutsha, okanye likhoyo ukuba liwusebenzise (yenza okwangoku).
Nje ukuba ubeko lukhethiwe, licela ukuba sibeke into ngaphakathi ngesandla. Bona ukuba iRibhoni ephezulu ibonakalisa imiyalelo esebenzayo, enjengokukhethwa kweSithuba seModeli, ukuqhelaniswa, ukubonakala kwemigca yento kunye nesikali. Kule meko siyibeka embindini kwisicwangciso sokujonga (Phezulu).
Emva koko ukubeka ezinye iimbono sakhetha ukhetho lwezoBomi, kwaye siwabeka njengoko kuboniswe kumfanekiso.
3 Yakha iinkcukacha zecandelo kwicandelo lento 3D
Iimbono ezicetywayo ziza nge-AutoCAD 2012 kodwa sele sele iinqununu kwaye icandelo leenkcukacha liyinxalenye ye iindaba ze-AutoCAD 2013. Ukusuka kukhetho lokuJonga ukujonga kunokwenzeka ukuba ukhethe ukusikwa okupheleleyo (okugcweleyo) okunokuma nkqo okanye okuthe tyaba, kulungelelaniswe ngendlela yomgca othobekileyo okanye ukusika okufanayo ecaleni komgca owenza ikhefu.
Emva kokukhetha into kunye nokubonisa umgca wokunquma, kuhlala kuphela ukufumana indawo yokuyibeka kuyo.
Ngokukhetha Ukubonakala ungabonisa ukuba sifuna into e-shaded, kunye nemigca efihliweyo, okanye nge-mesh ebonakalayo.
Landa i-AutoCAD 2013, kubafundi
Unyaka omkhulu weGoogle Chrome
Ukusuka kwi-i3Geo kunye nezixhobo zeSoftware kaRhulumente zaseBrazil ezingama-57
Lo mbono ngowona ulungileyo, into embi kukuba ndithathe ixesha lokutshintsha inguqulelo, kwaye ngoku ndizama ukuhlala kwi- _viewbase kwaye indinika lo myalezo ulandelayo “Umncedisi we-Inventor akakwazanga ukulayisha” ngoko ayisebenzi kum. , ukuba umntu wayesazi indlela yokulungisa le ngxaki
Siyabonga ngolwazi. Kuye kunceda kakhulu
Nangona kunjalo ndinengxaki. Ndifuna ukubona ubukhulu beembono eziliqela kodwa azibonakali (kungekhona ngendlela ochaze ngayo)
Ndiyayixabisa ngokwenene ukuba undiphawule ngesandla esincinane
Agapito Perez uthi:
Ndicinga ukuba eli lizwi lihle kakhulu
course AutoCAD Free
Inkqubo ye-3D ye-Civil yemisebenzi yoluntu-Inqanaba 2
Iindibano, imiphezulu, amacandelo umnqamlezo, cubing. Funda ukwenza uyilo kunye nemisebenzi esisiseko yomgama ngesoftware ye-Autocad Civil3D esetyenziswe ...
Kule khosi siza kugxila ekusetyenzisweni kwezixhobo zeRevit ezisincedayo ekwenzeni ...